Sawirro:-Qarax Miino Oo Xalay Ka Dhacay Magaalada Muqdisho – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Sawirro:-Qarax Miino Oo Xalay Ka Dhacay Magaalada Muqdisho
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Jugta qarax xoogan oo xalay saqdii dhexe laga maqlay degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir,kaasi oo ka dhacay Guri ku yaalla Wadada Warshadaha ee Magaalada Muqdisho.
Dad goobjoogayaal ah ayaa waxa ay Dalsan u sheegeen in qaraxa uu ahaa nooca Miinada dhulka lagu aaso,isla markaana uu ku dhex dhacay Guri ku yaalla Nawaaxiga Kaalin lagu iibiyo Shidaalka oo ku taalla Warshadaha.
Goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa durbo gaaray Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska Soomaaliya,iyagoo halkaas ka sameeyay baaritaano kala duwan ku aadan sida wax ay u dhaceen.
Ciidamada ayaa waxaa la sheegay in howlgalkaasi ay ku soo qabteen dadkii deganaa guriga uu ka dhacay qaraxa,waxaana haatan lagu wadaa baaritaano.
Sawirro laga soo qaaday Gurigaas ayaa waxa ay muujinayaan burbur xoogan oo soo gaaray,kaasi oo ka dhashay qaraxii xalay saqdii dhexe ka dhacay halkaasi.
Previous articleFarmaajo oo ka bilaabay dalka Kenya dhaqankii iibsashada saxaafadda iyo dowlada Kenya oo ka warheshay (Xog)
Next articleFarmaajo iyo KHEYRE oo isku qabtay xiisadda Kenya iyo la-kulankii Kenyatta’
DEG DEG:- Qarax Goor Dhow Ka Dhacay Degmada Awdheegle Iyo Rasaas...
DEG DEG: Hoobiyeyaal lagu garaacay dhismayaal ay Muqdisho ka degan yihiin...